Euro 2012 Final Spain Vs Italy, Faalo Ku Saabsan Ciyaartan Xiisaha Badan
Tababaraha xulka Spain Vicente del Bosque ayaa waxaa uu go’aan ka gaari doonnaa cidda ama xidigga uu kuso bilaabi doonno Alvaro Negredo ama ciyaryaahn kale.
Cesk Febrigas ayaa waxaa uu yahay mid uu jecel yahay in Tababaraha xulka Spain Del Bosque uu kusoo bilaabo kulankaan wuxuna ka ciyaari doonaa mar kale weerarka.
Ignazio Abate ayaa dib ugu soo laabanaya kadib markii uu ka maqnaa Seme finalka koobkan kulankii Germany isagoo dhaawac ka qabay dhanka cajarka.
Labada weeraryahan ee Antonio Cassano ayaa ka dhaawacan labada jilib halka Mario Malotelli oo xanuun dareemayay kulankii ugu dambeyay ayaa labadoodaba kusoo bilaaban doonna kulankaan.
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee Danielle De Rossi ayaa dhamaystay 90 daqiiqo kulankii Germany ay kaga horjeedeen kadib markii horey u xanuun u dareemayay.
Maqnaanshihii Abate kulankii Germany ayaa Fedrico Balzaretti wuxuu fursad u hellay inuu ka ciyaar daafaca midig isagoo ka ciyaari jiray daafaca bidix,halka haddii Balzaretti uu dib ugu laabto booskisa saxda ah waxa dhacaysa in Giorgio Chielini uu ka ciyaaro daafaca dhexe waxana kursiga keydka galaya :Leonardo Bonucci.
Daafaca kooxda Napoli Christian Maggio ayaa dib ugu soo laabtay ganaax uu ku maqnaa isagoo kamid ah xidigaha kurisiga keydka ee kulankaan.
Waa ceeb in ay koobkaan naga qaado xulka talyaaniga oo haysta xulkii ugu xumaa halka aan ka haysanno xul wanagsan waxaynu nahay horyalka yurub horyaalka Adduunka sidaas ayana laga soo xigtay dhinaca Spain.
Azzurri wa talyaanige waxa koobka adduunka 2012 ka reebay Slovakia waxaan warbaahinta Talyaaniga ay isku raacday xiligaan inay ahayd tii ugu xumed oo xulka talyaaniga la kulmo kadib markii si lamid ah sidaas uu dalka Waqooyga Korea uu koobka adduunaka adduunak ka reebay sanadkii 1966.
Tababare Cesare Prandelli, wuxuu rabaa kadib labo sanno oo ceeb ay kala soo hoyden Talyaaniga koobka adduunka haatan inuu noqdo horyaalka Yurub oo uu waliba ka qaado koobkan dalka isku haysta horyaalka Yurub iyo Adduunka ee Spain.
Xulka Talyaaniga aya raadinaya inuu qaado koobkii 6-aad oo caalami ah kadib 4 jeer oo uu qaaday koobka adduunka iyo hal jeer oo uu qaaday koobka Yurub.
Talyaani ayaa 2-1 kaga soo badiyay Sem finalka dalka Germnay oo ahaa mid kamid ah dalalkii looga cabsanayay koobkan.
Xulka Spain wuxuu rajo ka qabaa inuuu noqdo xul qaada saddex koob oo yurub ah,isla markaasn ay qaadaan koobkaan labo jeer oo is xig xiga.
Labadaan dal ayaa kulmay 1980-kii koobka Qaramada yurub waxaana ay isla dhaafi wayen 0-0,sanadki 1988 ayaa Talyaniga uu ku badiyay 1-0 waxana u dhaliyay Gianlica Vialli waxaana ay koobkaan heerkiis guruubyada oo ay ku kulmeen Bar baro 1-1 ah,iyadoo dalka Spain uu ahaa dalkii ugu dambeeyay ee ka reebay talyaniga koobka Euro 2008..
Ciyaarihii 10-ka kulan ee ugu dambeeyay oo ay kulmaan ayaa 7 kamid ah ku dhamaatay bar Baro 0-0 ah qeybta ama kaambiyada hore.
Spain hadduu badiyo ayaa noqonaysa marki 4-aad oo kooxo isku guruub ah ay koob kala qaadaan waxaana sanadkii 2004 koobka qaday Greece oo ka qaaday Portugal oo ay isku guruub ahaayeen,Hollan aya ka qaaday 1988 koobka Euro iyagoo isku guruub ahaayeen,Dalka Germnay ayaa qaday koobkana kana badiyay Czech finalkii kobka Euro 1996 waxana ay ahayen isku guruub.
Xulka Spain ayaa 11 ciyaarood aan laga badinin koobkan waxana guuldaradii ugu dambeysay ee koobkan kazoo gaarto ay ahayd mid 1-0 looga badiyay guruubyada sanadkii 2004.
Labadaan ciyaartooy Cesc Fabregas iyo Santi Cazorla ayaa kulankan u noqonaya kii 8-aad Iyagoo si badal ah kusoo galaya.
Markii ugu dambeysay ee Spain ay ku guul daraysato iyado gool la hormartau waxaana ugu dambeyay Natiijo xumadas oo kale 6-dii September 2006 waxaana looga badiyay 3-2 oo dalka Waqooyga Ireland.
Haddii uu Tababare Del Bosque uu qaado koobkan ayuu noqonayaa tababarihi 2-aad ee sidaas sameeya kadib Helmut Schon oo sameeyay 1972 iyo 1974 oo uu qaaday koobka yurub kadiban koobka adduunka.
Talyaaniga ayaa soo gaaray ilaa 8 jeer fiinaalada koobka adduunka iyo koobka Yurub waxaana ay qaadeen koobkan talyaaniga 1968.
Dalka talyaaniga ayaa garay Finalka koobka Yurub Labo jeer ooh ore waxana mid kamidm ah ka qaaday xulka France.
Wiilasha Parandelli ayaa badiyay labo jeer ilaa 8 jeer ee ugu dambeysay.
Ignazio Abate ayaa dib ugu soo laabanaya kadib markii uu ka maqnaa Seme finalka koobkan kulankii Germany isagoo dhaawac ka qabay dhanka cajarka.Labada weeraryahan ee Antonio Cassano ayaa ka dhaawacan labada jilib halka Mario Malotelli oo xanuun dareemayay kulankii ugu dambeyay ayaa labadoodaba kusoo bilaaban doonna kulankaan.
Daafaca kooxda Napoli Christian Maggio ayaa dib ugu soo laabtay ganaax uu ku maqnaa isagoo kamid ah xidigaha kurisiga keydka ee kulankaan.Waa ceeb in ay koobkaan naga qaado xulka talyaaniga oo haysta xulkii ugu xumaa halka aan ka haysanno xul wanagsan waxaynu nahay horyalka yurub horyaalka Adduunka sidaas ayana laga soo xigtay dhinaca Spain.
Talyaani ayaa 2-1 kaga soo badiyay Sem finalka dalka Germnay oo ahaa mid kamid ah dalalkii looga cabsanayay koobkan.Xulka Spain wuxuu rajo ka qabaa inuuu noqdo xul qaada saddex koob oo yurub ah,isla markaasn ay qaadaan koobkaan labo jeer oo is xig xiga.Kulamadii hore.
Labadaan dal ayaa kulmay 1980-kii koobka Qaramada yurub waxaana ay isla dhaafi wayen 0-0,sanadki 1988 ayaa Talyaniga uu ku badiyay 1-0 waxana u dhaliyay Gianlica Vialli waxaana ay koobkaan heerkiis guruubyada oo ay ku kulmeen Bar baro 1-1 ah,iyadoo dalka Spain uu ahaa dalkii ugu dambeeyay ee ka reebay talyaniga koobka Euro 2008.
Xulka Spain ayaa 11 ciyaarood aan laga badinin koobkan waxana guuldaradii ugu dambeysay ee koobkan kazoo gaarto ay ahayd mid 1-0 looga badiyay guruubyada sanadkii 2004. Labadaan ciyaartooy Cesc Fabregas iyo Santi Cazorla ayaa kulankan u noqonaya kii 8-aad Iyagoo si badal ah kusoo galaya.
Haddii uu Tababare Del Bosque uu qaado koobkan ayuu noqonayaa tababarihi 2-aad ee sidaas sameeya kadib Helmut Schon oo sameeyay 1972 iyo 1974 oo uu qaaday koobka yurub kadiban koobka adduunka. Italy.
Talyaaniga ayaa soo gaaray ilaa 8 jeer fiinaalada koobka adduunka iyo koobka Yurub waxaana ay qaadeen koobkan talyaaniga 1968. Dalka talyaaniga ayaa garay Finalka koobka Yurub Labo jeer ooh ore waxana mid kamidm ah ka qaaday xulka France.